Customer Service - PAÑÑĀ Online School
Customer Service လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ၄င်းလုပ်ငန်းတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသူများ နှင့် customer Service ကို စိတ်ဝင်စားသူများ တက်ရောက်သင့်ပါသည်။
Dr. Jenny Lao @Ni Mya Si
Founder of JENKO-Center for Regional Business Training
Daw Ni Mya Si @ Jenny Lao is the founder and director of Sein Lan Lwin Pyin (Green Pastures) Co.Ltd. She is also the founder and chief consultant of Jenko Education since 2000, providing consultancy f... More
Customer Service (Part - 1)
Faculties : Dr. Jenny Lao @Ni Mya Si|;|33
မိမိ အနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုဓလေ့ကောင်း ဆိုတာ ဘာလဲ ကို နားလည်သွားမည်။ ထိရောက်သော လူထုဆက်သွယ်ရေးနည်းစနစ်ဖြင့် မိမိ၏ ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုဓလေ့ကျွမ်းကျင်မှုကို မည်ကဲ့သို့ ပိုမိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရမည်ကို နားလည်မည်။ မိမိ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းဆောင်ရည် သည် မိမိ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရသူများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် မည်မျှ အရေးကြီးကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်မည်။ ဝန်ဆောင်မှုဓလေ့ကောင်း တည်ဆောက်နိုင်မှုကြောင့် မိမိ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ပိုုမိုချောမွေ့ အောင်မြင်နိုင်ကြောင််းကို နားလည်ဘောပေါက်မည်။
01. Introduction to Customer Service
02. What Is Good Customer Service
03.4Ps
04.Body Position ( Part - 1 )
05. Body Position ( Part -2)
06. People Communication
07.7Words Of No Use For Good Customer Service
Customer Service Part 1 (PDF)
မိမိ အနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုဓလေ့ကောင်း ဆိုတာ ဘာလဲ ကို နားလည်သွားမည်။ ထိရောက်သော လူထုဆက်သွယ်ရေးနည်းစနစ်ဖြင့် မိမိ၏ ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုဓလေ့ကျွမ်းကျင်မှုကို မည်ကဲ့သို့ ပိုမိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရမည်ကို နားလည်မည်။ မိမိ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းဆောင်ရည် သည် မိမိ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရသူများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် မည်မျှ အရေးကြီးကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်မည်။ ဝန်ဆောင်မှုဓလေ့ကောင်း တည်ဆောက်နိုင်မှုကြောင့် မိမိ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ပိုုမိုချောမွေ့ အောင်မြင်နိုင်ကြောင််းကို နားလည်သဘောပေါက်မည်။
01. What is Management Skill
02. What Is Decision Making Skill And Problem Solving Skill
03. Communication Skill And Time Management
04. Excellence Customer Service